Banaanbaxyo waaweyn oo ka bilaabanaya Masar - iftineducation.com
iftineducation.com – Waxaa maanta salaada Jimce kadib lagu wadaa in dalka Masar ay ka dhacaan banaanbaxyo waaweyn oo looga soo horjeedo dowlada Cabdifataax Al SISI.
Banaanbaxyadan ayaa waxaa soo diyaariyey xisbiga Salafiga ah ee Salafist Front oo sheegay inay doonayaan in ay maamul Islaami ah ka dhisaan dalkaasi Masar. Waxayna ugu baaqeen shacabka inay bilaabaan Kacdoonkii Islaamiga.
Dowlada Masar ayaa ku hanjabtay inay gacan adag ku qaban doonto cidii amniga khal khal gelisa, waxaana heegan sare la geliyey ciidamada.
Todobaadyadii lasoo dhaafay ayaa waxaa sii xoogeysanayey dagaalada ciidamada Masar iyo kooxo hubeysan oo islaami ah ku dhexmaraya gobalka Siinaay, kaasi oo gaaray heer ay dowlada u adeegsato taangiyo iyo diyaaradaha dagaalka.
Mudaharaadyada maanta lagu wado inay ka dhacaan guud ahaan dalka Masar ayey xukuumada Cabdifatax Al Sisi ka cabsi qabtaa inay isugu soo baxaan dad aad ubadan.
Kenya oo amnigeeda adkeyneysa